သီပေါမင်းအား ချစ်မိမှားခဲ့သူ ၁၇ နှစ်သမီးလေး ဒိုင်းခင်ခင် - Barnyar Barnyar
April 9, 2022 linn htet ချစ်ရေးချစ်ရာ 0
သီပေါမင်းသည် စုဖုရားလတ် တစ်လင်တစ်မယားစနစ်၏ ပြင်းထန်သော အပြစ်ပေးမှုများအား သိရှိပါသော်လည်း အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ရှိ မိန်းမချောလေး ဒိုင်းခင်ခင်အား ချစ်ခင်စုံမက်ပါသောကြောင့် မြောက်နန်းစံမိဖုရားအဖြစ် တင်မြောက်လိုသည်ဟု ဆိုလာသည်။
သို့သော် ဒိုင်းခင်ခင်၏ မိဘများသည် စုဖုရားလတ်၏ အန္တရာယ်ကို ကြောက်လှပါကြောင်း လျှောက်တင်သည့်အခါ …. သီပေါမင်းသည်… မိမိတာဝန်ယူကြောင်း စုဖုရားလတ် အား တဖြည်းဖြည်း ပြော၍အသိပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အကယ်၍ ဒိုင်းခင်ခင် အပေါ်၌ စုဖုရားမှ အန္တရာယ်တစ်စုံတစ်ရာ ကျရောက်စေခဲ့ပါမူ … …. မိမိသ ည် ထီးနန်းအား လက်လွှတ် ဆုံးရှုံးစေပြီး တိုင်းပြည် ပျက်ပါစေကြောင်း ကတိသစ္စာ ကျိန်ဆိုခဲ့ပါသည်။
စုဖုရားလတ်တွင် ဒုတိယသမီးတော်ဖွားမြင်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ သီပေါမင်းမှ ဒိုင်းခင်ခင်အား ချစ်ခင်စုံမက်ကြောင်း မြောက်နန်းစံ ထားလိုကြောင်း စုဖုရားအား ဖွင့်ပြောလိုက်စဉ် အမြတ်တော်ရှသော်လည်း ချက်ချင်းထိန်းကာ အခြေနေအား စောင့်ကြည့်ရင်း သီပေါမင်းတိုင်းပြည်ရေး အနည်းငယ် စိတ်ထွေနေချိန်တွင် စုဖုရားသည် ဒိုင်းခင်ခင်အား ကွက်မျက်စေခဲ့သည်။
ဒိုင်းခင်ခင်အား နန်းဝတ် နန်းစားများအား ချွတ်စေပြီး မြေပြင်တွင် ဒူးထောက်ကာ လက်ပြန်ကြိုးတုတ် ဦးခေါင်း အားမော့စေပြီး ဝါးစိမ်းဒုတ်ဖြင့် လည်မြိုအား ရိုက်ကာ ကွက်မျက်မိန့် ချခဲ့သည်။ … ထိုချိန်တွင် ဒိုင်းခင်ခင်၏ နောက်ဆုံးဆန္ဒအား ပြောခွင့်ပေးရာတွင် သီပေါဘုရင် မျက်နှာတော်အား တကြိမ်မျှ ဖူးခွင့် တောင်းခံခဲ့သည်…။ သို့သော်… သီပေါမင်းမှ လာရောက်ဖူးမျှော်ခွင့် မပေးနိုင်ကြောင်း အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။ မိမိ ကျိန်ဆိုခဲ့သည် များကိုလဲ ဥပက္ခာပြုခဲ့သည်။
ဒိုင်းခင်ခင်မှ မိဘများ အခြေအနေ မေးမြန်းခဲ့ရာတွင် အဆင်ပြေကြကြောင်း သတင်းစကား ရရှိပါသော်လည်း…ထိုအချိန်တွင် ဒိုင်းခင်ခင်၏ မိဘ များအား စုဖုရားလတ် အမိန့်တော်နှင့် ကွပ်မျက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ဒိုင်းခင်ခင် သိမသွားခဲ့ရှာပေ…။ ဒိုင်းခင်ခင်မှ မိမိ သည် သီပေါမင်း၏ ကိုယ်ဝန်အား ဆောင်ထားချိန် ဖြစ်ပါသောကြောင့် ရင့်မာနေသော ကိုယ်ဝန်အား မီးရှူးသန့်စင်မွေးပြီးပါမှ ကွပ်မျက်ပါရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။
တိုင်တားမင်းကြီးမှလည်း ဘုရင့်သွေးသားတော်အား ကွပ်မျက်ခဲ့သော် တိုင်းပြည်ပျက်တတ်သော အယူရှိကြောင်း သံတော်ဦးတင် လျှောက်ထားပါသော်လည်း စုဘုရား၏ အမိန့်အာဏာအား မလွန်ဆန်နိုင်သော သီပေါမင်းမှာ တားဆီးခဲ့ခြင်းမရှိပေ…။
(ထိုစဉ် နန်းတွင်းပုရောဟိတ်များမှ ဒိုင်းခင်ခင်သည် သီပေါမင်းအား သားတော်လေး ဖွားမြင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ထိုသားတော်လေးသည် ထီးမွေနန်းမွေဆက်ခံ မည်ဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည်သာယာဝပြော စည်ပင်တိုးတတ်အံ့ဟု နိမိတ်ဖတ်ခဲ့သည်။)
ထိုနိမိတ်ကြောင့် သမီးတော်များသာ မွေးထားသော စုဖုရားသည် မိမိနေရာအာဏာ မရတော့သည်များအား စိုးရိမ်ကြီးကာ တိုင်တားမင်းကြီး တားနေသည့်ကြားမှ ဒိုင်းခင်ခင်အား အမြန်ကွက်မျက်စေခဲ့သည်။
ဒိုင်းခင်ခင်မှ ကံတော်မကုန်ခင် အချိန်တွင်းတွင် မိမိအားသစ္စာကျိန်ဆို သိမ်းပိုက်ခဲ့သော မိမိ ချစ်မြတ်နိုးရပါသော သီပေါဘုရင်အား ရည်မှန်းဦးချခဲ့ပြီး သစ္စာများ မစူးရှပါစေရန် မျက်ရည်များဖြင့် ဆုတောင်းခဲ့သည်…။
၁၈၈၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ညတွင် ကုန်းဘောင်မင်းဆက် အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ထူးခြားဖြစ်စဉ်များမှာ မုန်းတိုင်းကျရောက်ခဲ့ပြီး တစ်ညလုံးနီးပါး ကောင်းကင်ယံမှ ကြယ်များ တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေခဲ့သည်။ သဘာဝတရားကြီးကပင်လျှင် ကုန်းဘောင်မင်းဆက် မလှမပ အဆုံးသတ်ခြင်းကို ငိုကြွေးနေသယောင် ထင်ရသည်….။
၁၈၈၅ ခုနှစ် နိုင်ဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် မြန်မာဘုရင် အရှင်နှစ်ပါးအား အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ သူရိယသင်္ဘောဖြင့် ပင့်ဆောင်ခေါ်ယူလာခဲ့ပြီး မြန်မာ ကုန်းဘောင် ဘုရင်စနစ် ပြတ်တောက်ခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သော ၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်… သီပေါမင်း နှင့် စုဖုရား ပါတော်မူခဲ့သည့်နေ့မှ နှစ်ပေါင်း ( ၁၃၂ ) နှစ်ပြည့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ကိုးကား ။ ။ The King In Exile (ဘာသာပြန် ) နှင့် ချစ်မိမှားသူ ဒိုင်းခင်ခင်နှင့် နန်းတွင်း လျှို့ဝှက်ဇာတ်လမ်းများ
Credit. Own Creator
သီပေါမငျးသညျ စုဖုရားလတျ တဈလငျတဈမယားစနဈ၏ ပွငျးထနျသော အပွဈပေးမှုမြားအား သိရှိပါသျောလညျး အသကျ ၁၇ နှဈအရှယျရှိ မိနျးမခြောလေး ဒိုငျးခငျခငျအား ခဈြခငျစုံမကျပါသောကွောငျ့ မွောကျနနျးစံမိဖုရားအဖွဈ တငျမွောကျလိုသညျဟု ဆိုလာသညျ။
သို့သျော ဒိုငျးခငျခငျ၏ မိဘမြားသညျ စုဖုရားလတျ၏ အန်တရာယျကို ကွောကျလှပါကွောငျး လြှောကျတငျသညျ့အခါ …. သီပေါမငျးသညျ… မိမိတာဝနျယူကွောငျး စုဖုရားလတျ အား တဖွညျးဖွညျး ပွော၍အသိပေး သှားမညျဖွဈကွောငျးနှငျ့ အကယျ၍ ဒိုငျးခငျခငျ အပျေါ၌ စုဖုရားမှ အန်တရာယျတဈစုံတဈရာ ကရြောကျစခေဲ့ပါမူ … …. မိမိသ ညျ ထီးနနျးအား လကျလှတျ ဆုံးရှုံးစပွေီး တိုငျးပွညျ ပကျြပါစကွေောငျး ကတိသစ်စာ ကြိနျဆိုခဲ့ပါသညျ။
စုဖုရားလတျတှငျ ဒုတိယသမီးတျောဖှားမွငျပွီး နောကျပိုငျးမှာ သီပေါမငျးမှ ဒိုငျးခငျခငျအား ခဈြခငျစုံမကျကွောငျး မွောကျနနျးစံ ထားလိုကွောငျး စုဖုရားအား ဖှငျ့ပွောလိုကျစဉျ အမွတျတျောရှသျောလညျး ခကျြခငျြးထိနျးကာ အခွနေအေား စောငျ့ကွညျ့ရငျး သီပေါမငျးတိုငျးပွညျရေး အနညျးငယျ စိတျထှနေခြေိနျတှငျ စုဖုရားသညျ ဒိုငျးခငျခငျအား ကှကျမကျြစခေဲ့သညျ။
ဒိုငျးခငျခငျအား နနျးဝတျ နနျးစားမြားအား ခြှတျစပွေီး မွပွေငျတှငျ ဒူးထောကျကာ လကျပွနျကွိုးတုတျ ဦးခေါငျး အားမော့စပွေီး ဝါးစိမျးဒုတျဖွငျ့ လညျမွိုအား ရိုကျကာ ကှကျမကျြမိနျ့ ခခြဲ့သညျ။ …
ထိုခြိနျတှငျ ဒိုငျးခငျခငျ၏ နောကျဆုံးဆန်ဒအား ပွောခှငျ့ပေးရာတှငျ သီပေါဘုရငျ မကျြနှာတျောအား တကွိမျမြှ ဖူးခှငျ့ တောငျးခံခဲ့သညျ…။
သို့သျော… သီပေါမငျးမှ လာရောကျဖူးမြှျောခှငျ့ မပေးနိုငျကွောငျး အကွောငျးပွနျခဲ့သညျ။ မိမိ ကြိနျဆိုခဲ့သညျ မြားကိုလဲ ဥပက်ခာပွုခဲ့သညျ။
ဒိုငျးခငျခငျမှ မိဘမြား အခွအေနေ မေးမွနျးခဲ့ရာတှငျ အဆငျပွကွေကွောငျး သတငျးစကား ရရှိပါသျောလညျး…ထိုအခြိနျတှငျ ဒိုငျးခငျခငျ၏ မိဘ မြားအား စုဖုရားလတျ အမိနျ့တျောနှငျ့ ကှပျမကျြခဲ့ပွီး ဖွဈသညျ။ ဒိုငျးခငျခငျ သိမသှားခဲ့ရှာပေ…။
ဒိုငျးခငျခငျမှ မိမိ သညျ သီပေါမငျး၏ ကိုယျဝနျအား ဆောငျထားခြိနျ ဖွဈပါသောကွောငျ့ ရငျ့မာနသေော ကိုယျဝနျအား မီးရှူးသနျ့စငျမှေးပွီးပါမှ ကှပျမကျြပါရနျ တောငျးဆိုခဲ့ပါသညျ။
တိုငျတားမငျးကွီးမှလညျး ဘုရငျ့သှေးသားတျောအား ကှပျမကျြခဲ့သျော တိုငျးပွညျပကျြတတျသော အယူရှိကွောငျး သံတျောဦးတငျ လြှောကျထားပါသျောလညျး စုဘုရား၏ အမိနျ့အာဏာအား မလှနျဆနျနိုငျသော သီပေါမငျးမှာ တားဆီးခဲ့ခွငျးမရှိပေ…။
(ထိုစဉျ နနျးတှငျးပုရောဟိတျမြားမှ ဒိုငျးခငျခငျသညျ သီပေါမငျးအား သားတျောလေး ဖှားမွငျပေးမညျဖွဈပွီး ထိုသားတျောလေးသညျ ထီးမှနေနျးမှဆေကျခံ မညျဖွဈပွီး တိုငျးပွညျသာယာဝပွော စညျပငျတိုးတတျအံ့ဟု နိမိတျဖတျခဲ့သညျ။)
ထိုနိမိတျကွောငျ့ သမီးတျောမြားသာ မှေးထားသော စုဖုရားသညျ မိမိနရောအာဏာ မရတော့သညျမြားအား စိုးရိမျကွီးကာ တိုငျတားမငျးကွီး တားနသေညျ့ကွားမှ ဒိုငျးခငျခငျအား အမွနျကှကျမကျြစခေဲ့သညျ။
ဒိုငျးခငျခငျမှ ကံတျောမကုနျခငျ အခြိနျတှငျးတှငျ မိမိအားသစ်စာကြိနျဆို သိမျးပိုကျခဲ့သော မိမိ ခဈြမွတျနိုးရပါသော သီပေါဘုရငျအား ရညျမှနျးဦးခခြဲ့ပွီး သစ်စာမြား မစူးရှပါစရေနျ မကျြရညျမြားဖွငျ့ ဆုတောငျးခဲ့သညျ…။
၁၈၈၅ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလ ၂၇ ရကျနညေ့တှငျ ကုနျးဘောငျမငျးဆကျ အဆုံးသတျခဲ့သညျ။ ထူးခွားဖွဈစဉျမြားမှာ မုနျးတိုငျးကရြောကျခဲ့ပွီး တဈညလုံးနီးပါး ကောငျးကငျယံမှ ကွယျမြား တဖွုတျဖွုတျကွှခေဲ့သညျ။ သဘာဝတရားကွီးကပငျလြှငျ ကုနျးဘောငျမငျးဆကျ မလှမပ အဆုံးသတျခွငျးကို ငိုကွှေးနသေယောငျ ထငျရသညျ….။
၁၈၈၅ ခုနှဈ နိုငျဝငျဘာလ ၂၉ ရကျနေ့ ညနပေိုငျးတှငျ မွနျမာဘုရငျ အရှငျနှဈပါးအား အိန်ဒိယနိုငျငံသို့ သူရိယသင်ျဘောဖွငျ့ ပငျ့ဆောငျချေါယူလာခဲ့ပွီး မွနျမာ ကုနျးဘောငျ ဘုရငျစနဈ ပွတျတောကျခဲ့သညျ။
လှနျခဲ့သော ၂၀၁၇ နိုဝငျဘာ ၂၉ ရကျ… သီပေါမငျး နှငျ့ စုဖုရား ပါတျောမူခဲ့သညျ့နမှေ့ နှဈပေါငျး ( ၁၃၂ ) နှဈပွညျ့မညျ ဖွဈပါသညျ။
ကိုးကား ။ ။ The King In Exile (ဘာသာပွနျ ) နှငျ့ ခဈြမိမှားသူ ဒိုငျးခငျခငျနှငျ့ နနျးတှငျး လြှို့ဝှကျဇာတျလမျးမြား
Total Hits : 336228